Izihluthulelo Eziyi-10 Zempumelelo Zamabhizinisi ezisebenzisa I-Social Media | Martech Zone
ULwesine, May 14, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Namuhla ekuseni ngihlangane nenkampani futhi ngabelana okuningi ngangokunokwenzeka ukuthi kanjani futhi kungani amabhizinisi asebenzisa ubuchwepheshe bezokuxhumana.
Izinkampani eziningi kakhulu bezilokhu zitshuza kuqala bese zizama ukulungisa izingqinamba kamuva kodwa ngikholwa ukuthi lokhu kungakhubaza kakhulu impumelelo yenkampani. Imvamisa, asitholi ithuba lesibili lokusebenzisa isu lezokuxhumana. Kunamathuna akhulayo amaphrojekthi wezokuxhumana alahliwe, kufaka phakathi amabhulogi ezinkampani, aqalwe yizinkampani ezinabasebenzi abanamakhono nezinhloso ezinhle.
Ukuqaphela ukwakha isisekelo esihle kuzovumela inkampani ukuthi izuze kakhulu lapho isebenzisa ubuchwepheshe bezokuxhumana ukuze yonge imali, ikhulise imali futhi ithuthukise ukuxhumana nabasebenzi, amaklayenti namathemba.
Ipulatifomu - Akwanele ukusebenzisa lokho wonke umuntu akusebenzisayo uma kuziwa enkampanini yakho. Yonke ipulatifomu kufanele ibuyekezelwe ukuphepha, ubumfihlo, izipele, ukunakekelwa, ukusekelwa, ukusekelwa kokuhlanganiswa kanye nokuqonda izinsiza ezidingekayo ukwenza nokugcina izinkundla.
Transparency - kubalulekile ukuthi izinkampani zibone ukuthi lokhu akuyona indawo yezincwajana, futhi akuyona indawo yokugaxekile. Abasebenzi, amathemba namakhasimende bafuna ukuthi usebenzise imithombo yezokuxhumana ngoba bafuna ukukwazi futhi baqonde ngokuphelele ukuthi ubudlelwane nawe buzobazuzisa kanjani.
ukungaguquguquki - Kufanele ugcwalise okulindelwe ngabantu kokuqukethwe nezikhathi. Imithombo yezokuxhumana akuyona i-sprint, imarathon evame ukudinga izinsizakusebenza eziningi ukubandakanya izethameli kusenesikhathi.
passion - Impumelelo yakho izoncika kakhulu ekutholeni izinsiza kusebenza ezithanda abasebenzisanayo. Ukwenza abasebenzi abangazweli ekusebenziseni nasekusebenziseni imithombo yezokuxhumana kuzokhala kungamanga ngokushesha futhi ekugcineni kuholele ekwehlulekeni.
iqhaza - Amandla wokuxhumana nomphakathi asezinombolweni. Ukuphawula nokuxhumana ngenethiwekhi kushayela ithrafikhi nezinga ezinkundleni zokuxhumana. Kufanele ukhuthaze futhi uklomelise ukubamba iqhaza… ikakhulukazi ezinsukwini zokuqala zokukhula.
Momentum - Ngokuhambisana nokungaguquguquki, kubalulekile ukuqaphela ukuthi imithombo yezokuxhumana akuyona into kuwe Vula. Ukukhula nempumelelo kudinga umzamo ongaguquguquki, ongapheli, nongaguquguquki.
IKomidi - Ukwehlukahluka ekusebenzeni kuzoholela emiphumeleni engcono ngoba abasebenzi abahlukene bayakhangwa (futhi bavame ukuphazamiseka) ngamathuluzi ahlukile. Kubalulekile ukuthi iqembu labelane ngamasu nezinhloso zokunikeza umkhombandlela.
Ukuxhumanisa - Izinhlelo zomphakathi ezethulwa ngesizilo zikhula kancane futhi zivame ukwehluleka. Ukuhlanganiswa ngokomzimba phakathi kwama-mediums, i-automation kokuqukethwe, nokuxhumana phakathi kweminyango kufanele kukhule ngokushesha uhlelo lwakho. Thuthukisa izinhlelo zakho zenhlalo kusayithi lakho naku-imeyili. Cindezela okuqukethwe phakathi ngakunye ukuwela impova yethrafikhi ngempumelelo.
Ukuqapha - Ukubeka izaziso nokuqapha analytics kuzovumela ithimba lakho ukuthi lithathe isinyathelo ngokuya ngokutholakele.
Imigomo - Izinkampani zivame ukungena emithonjeni yezokuxhumana ngaphandle kokucabanga ngalokho empeleni ezifuna ukukufeza noma ukuthi zizolinganisa kanjani impumelelo. Kanjani kuthanda ulinganisa impumelelo ngohlelo lwakho lwezokuxhumana? Zimbalwa izingcingo zesevisi yamakhasimende? Amakhasimende amaningi? Ukuthuthukisa ukusebenza kwabasebenzi? Cabanga ngaphambi kokuthi ugxume!
Enye yama-analogies engithanda ukuwanikeza inkampani ukubheka i- Burj Dubai. Njengamanje kumamitha ayi-800 ubude, iBurj Dubai izoba yindawo ephakeme kunazo zonke emhlabeni. Kuleli qophelo, akekho owaziyo empeleni ukuthi isakhiwo sizoba side kangakanani… abanikazi bayaqhubeka nokunweba ubude obuhleliwe.
Okusemqoka ekwazini ukukhuphukela phezulu yisisekelo esingenakungenwa esakhiweni esakhiwe kuso. Isisekelo seBurj Dubai sinezinqwaba eziyi-192 ezinwebeka ngaphezu kwamamitha ayi-50 phansi, zimboza amamitha-skwele angama-8,000, futhi zifaka ngaphezu kuka-110,000 amathani kakhonkolo!
Ukuhlela kahle nokwakha isu lenkampani yakho yezokuxhumana kuzoqinisekisa ukuthi yakhelwe esisekelweni esizosiza uhlelo lwezokuxhumana lukhule kahle ngaphezu kokulindelwe yiwo wonke umuntu. Woza ufushane nenkampani yakho kuthanda ukwehluleka kwengozi - into ejwayelekile kakhulu.
Tags: Sesha Marketing
May 14, 2009 ku-11: 47 PM
Ngithande ingxenye # 5 - ukukhuthaza nokuthola iqhaza okuhle. Indatshana enhle… ngiyabonga.